रगतको माग धान्नै कठिन
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजरगतको माग धान्नै कठिन
विराटनगर । नेपालमा रगत व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रले सामान्य अवस्थामा शनिबार मात्र चार सय युनिट रगत सङ्कलन गर्ने गर्दथ्यो ।
शनिबार प्रायः १०।१२ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुन्थे । एउटै स्थानबाट ५० युनिटभन्दा धेरै रक्तदान गर्ने स्वयंसेवी हुन्थे । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । यसले नेपालमा यतिबेला रगतको चरम अभाव छ भनेर पुष्टि गरेको छ ।
सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले रगतको चरम अभाव भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अभावबीच स्वयंसेवी रक्तदाताले गरेको रक्तदानले गर्दा बिरामीले रगत नपाएको अवस्था भने छैन । अहिले काठमाडौँका मुख्य–मुख्य अस्पतालले ब्लड बैङ्कको व्यवस्था गरेर आफ्ना अस्पतालका बिरामीलाई सहज रूपमा रगत उपलब्ध गराएका कारण रगतको अभाव पूर्ति गर्न सहज भएको छ ।
पछिल्लो समय निजी अस्पतालले पनि ब्लड बैङ्कको स्थापना गरेर रगत सङ्कलन गरिरहेका छन् । त्यसले रगत अभाव केही हदसम्म सहज बनाएको छ । डा. राजकर्णिकारले कोरोना महामारीकालमा हत्तपत्त कसैले रक्तदान गर्न नमान्ने गरेको बताइन् । स्वेच्छाले रक्तदान गर्ने व्यक्ति पनि कोरोनाको डरले पछि हट्दा रगतको अभाव हुन गएको हो । उनले कोरोना सङ्क्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले रक्तदानमा समस्या भएको बताइन् । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
धान्नै कठिन माग रगत